Wasaaradda Amniga Soomaaliya oo Isbadel ku sameysay Qorshaha Sugiga Amniga Muqdisho | SAHAN ONLINE
Wasaaradda Amniga Soomaaliya oo Isbadel ku sameysay Qorshaha Sugiga Amniga Muqdisho
MUQDISHO – Wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Isbadel lagu sameeyay qorshaha amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaallr ayaa sheegay in Isbadelka la sameeyay uu yahay in la furay Waddooyinkii xirnaa magaalada,ciidanka xalisilintana ay ku sugan yuhiin Wadada Warshadaha ee Muqdisho.
Maxamed Abuukar Islow Ducaalle ayaa faray ciidamada amniga inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka maadaama ay u adeegaan shacabka taas badelkeedana waxa uu shacabka ka dalbaday iney la shaqeeyaan ciidamada.
Jidadkii xirnaa sida jidka Wadnaha waan furnay, ilaa jidka Warshadaha ayaan geynay, waan sikinay, shacabka waxaan uga mahad-celinaa dulqaadka ay inoo muujiyeen waxaan ka dalbanayaa in ay si dhaw ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka, sidoo kale ciidamada waxaan farayaa in ay u dhimriyaan shacabka” ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay jidadka la furay,waxayna taasi meesha ka saartay culeyskii badnaa oo ay kala kulmi jireen baaritaanada.